Dom » Galitaanada ku sumaysan "xiaomi"
Xiaomi ayaa shaaca ka qaaday magaca headphones-ka cusub ee wireless-ka leh ee ANC
mi flipbuds pro, headphones, xiaomi
Xiaomi waxay shaaca ka qaaday magaca sameecadaha dhagaha ee cusub. Qaabka Mi FlipBuds Pro, maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa, waa in lagu soo bandhigo suuqa toddobaadkan. Xiaomi ayaa shaaca ka qaaday magaca qalabkeeda soo saaraha cusub qoraal ay ku daabacday Weibo ...
Xiaomi waxay diyaarinaysaa samaacado sameecado oo cusub
mi hawada 3 pro, taleefoonnada gacanta ee bilaa-waadka ah, xiaomi
Goor dhow, sameecadaha dhagaha ee wireless-ka cusub ee Xiaomi ayaa ka soo muuqan doona suuqa - Mi Air 3 Pro. Moodelku wuxuu ku sii dhowaanayaa inuu u baxo adduunka, oo wax badan ayaan ka ognahay iyaga. Xiaomi ayaa sii deynaya ...
Redmi Xusuusin 10 Pro 5G ayaa soo dhowaanaya. Miyuu noqon doonaa mid dhab ah oo ka yimaada Xiaomi?
redmi, redmi note, redmi note 10 pro 5g, xiaomi
Redmi Note 10 Pro 5G waa mid dhexdhexaad ah oo soo socda ee Xiaomi, kaas oo, sida laga soo xigtay macluumaadka, ay tahay in la helo qalabka 'Snapdragon 750G'. Eeg waxa intaa ka badan oo aad ka filan karto "Xiaomi iibka ku dhacay" cusub. Xiaomi waxay sii deysay bahal cusub shabakadu waxay ...
Xiaomi waxay xasuusineysaa dhamaadka iibka kahor ee nooca Mi 11 Lite 5G
Mi 11 Lite 5G waa warbaahin cusub oo ka socota xiaomi deggan. Si dhakhso ah ayey suuqa u soo gali doontaa, iminkana waa iib ka hor oo ku jira xirmo ay la socoto Mi Band 6. Xiaomi ma gaabineyso waxayna xusuusineysaa dhiirrigelinta dhiirrigelinta ...
Xiaomi waxay diyaarinaysaa bedelka Mi Note 10
bartanka dhexe 10, xiaomi
Xiaomi Mi Note 11, oo ah shirkad kale oo dhexdhexaad ah shirkaddan, ayaa dhowaan ka soo muuqan doonta suuqa Shiinaha. Telefoonada casriga ah ayaa horeyba loo cadeeyay, suuqana waa inuu bedelaa guusha Mi Note 10. Kulankii ugu dambeeyay ee cusub ee Xiaomi ayaa soo dhowaanaya, macluumaad ...
Drony, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, nololeedka, News, jabnaanta, Naag caqli badan, Waalid smart
Maalinta Hooyada 2021 - heshiisyada ugufiican!
70 May, anilane, dhexgal, laambad, duugista, uumi, badda, band, diirka, diirka ka daloola, saliidaha, daawashada caqliga, caday, caday, miisaanka, xiaomi
Waxaa imanaya May 26 - Maalinta Hooyada! Raadi wax yar ka hor oo u soo iibso hadiyad fiican hooyadaa. Waxaa laga yaabaa in wax laga helo aagga Smart Beauty;) Halkan waxaa ah soo-jeedimahayaga ku saabsan dalabyada ugu fiican ee Aliexpress! Hadaadan aqoon ...
Guriga Smart-ka May 2021 - Xiaomi, HeatIt, Aqara, Puron
kuleyl, Puron, xiaomi
Waqtiga loogu talagalay qaybta labaad ee Smart Home unboxing! Maxaa markan na sugaya?!
Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 - dib u eegis dareemayaal yar oo ka socda Xiaomi
heerkulka iyo huurka dareeraha, ma guriga, xiaomi
Gurigeyga caqliga badan si tartiib tartiib ah ayuu u korayaa. Mid ka mid ah waxyaabihii xigay ee aan go'aansaday inaan ku daro qolkeygu wuxuu ahaa dareemayaal - Mi Heerkulka & huurka Monitor 2 - oo aan ku helay dallacsiinta Aliexpress. Sidee ...
Mi Band 6 maalmaha Poland. Xiaomi waxay kululeysaa jawiga
mantag 6, xiaomi, xiaomi mi band 6
Xiaomi Mi Band 6 ayaa ka soo muuqan doona Poland. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay go'aansatay inay diiriso jawiga ka hor inta aan la bilaabin. Qiimaha xargaha curiska cusub waa inuu noqdaa mid soo jiidasho leh. Xiaomi waxay kululeysaa jawiga Soo-saaraha ayaa qorsheeyey soo bandhigida filimka Mi Band 6 April 29. Dhamaan ...
News, jabnaanta, Home smart
Dhiirrigelinta Toddobaadlaha Abril 19-25, 2021
Asbuuc kasta, waxaan ku soo uruurineynaa dallacsiinta ugu fiican adiga AliExpress, Geekbuying.pl iyo in ka badan! Ma waxaad dooneysaa dalab wanaagsan? Waad heshay iyada! Haddii aadan aqoon ama aad jeceshahay inaad naftaada xusuusiso sida loo sameeyo xitaa ka jaban dukaamaysiga ...